Seychelles New Kufamba Matanho Nekuda kweCOVID-19 Omicron Variant
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Seychelles New Kufamba Matanho Nekuda kweCOVID-19 Omicron Variant
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Seychelles New Travel Chiziviso
Bazi rezvehutano rakasimbisa kuti riri kushandisa matanho matsva ekufambisa kune vashanyi, zvizvarwa zveSeychellois nevagari vari kufamba kubva mudunhu reSouthern Africa nekuda kwekusiyana kweCCIDID-19 kuri kutenderera muSouth Africa nenyika dzakaitenderedza.
Mukupindura, kambani yenyika, Air Seychelles, yakamisa ndege dzese kubva kuJohannesburg kuenda kuSeychelles kunze kwedziya dzaZvita 1, Zvita 17, naZvita 19. ndege dzavo dzekusimuka.
Matanho matsva aya anoda kuti vanhu vese vagara vari kuSeychelles vanga vari kunyika idzi mumavhiki maviri apfuura kuti vaende kunoongororwa PCR kana vanga vari kuSeychelles kubva pavashanu (5) kusvika mazuva gumi nemana (14) vasvika. Avo vanga vari muSeychelles kwemazuva asingasviki mashanu (5) vanofanira kumirira Zuva rechishanu kuti vaende kunoongororwa PCR.
Vese maSeychellois nevagari vanodzokera kuSeychelles vanga vari kune ipi yenyika idzi mumavhiki maviri apfuura vanofanirwa kuzvivharira voga uye kutora bvunzo yePCR yekumanikidzwa paZuva 5 mushure mekusvika.
Kuenda kuSouth Africa nedzimwe nyika dzakatumidzwa kunoshorwa zvakanyanya.
Nepo pasina humbowo hunoratidza kuti musiyano weB.1.1.529, unonzi Omicron neWorld Health Organisation, waonekwa muSeychelles, zviremera zveko zvakaraira kuti hutano hweveruzhinji nemagariro aripo hunofanirwa kuremekedzwa zvakanyanya.
Kuziva kuti Seychelles inogamuchira vashanyi vese zvisinei nemamiriro avo ekudzivirira pamamiriro ezvinhu ekuti vane COVID-19 negative PCR test certificate iyo inofanirwa kutorwa mukati memaawa makumi manomwe nemaviri vasati vafamba, kunze kwevashanyi vanobva kunyika dziri parunyoro rwakatemerwa sezvinotevera: South Africa, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia neZimbabwe.
Hapana kuvharirwa kunodiwa kune vashanyi vanopinda Secheres. Zvisinei, vari kukurudzirwa zvakasimba kuti vabaiwe nhomba yakakwana vasati vafamba. Vanotenderwa kufamba mahara mukati mezororo ravo rose asi vanofanirwa kutevedzera zvese zvehutano hweveruzhinji matanho. Ivo zvakare vakasununguka kugara panzvimbo ipi neipi inopihwa hutano-yakasimbiswa yekushanya paine chitsidzo chekuti vanotevedzera zvese zvehutano zvibvumirano zviripo panzvimbo idzi.
Izvo zvichangoburwa zvekupinda zvinodiwa uye maitiro ehutano pamwe nese zvakagadziridzwa zvinyorwa zvevane marezenisi evashandi vekushanya uye nzvimbo dzekugara dzakasimbiswa seCOVID-yakachengeteka dziripo pa. Ministry of Foreign Affairs and Tourism webhusaiti uye Seychelles.govtas.com.